म्यागी फक्स/ सिएनएन
हङकङका चिकित्सकले तीन प्रकारको एन्टिभाइरल र रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली बढाउने औषधिले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई चाँडै निको बनाउने बताएका छन्।
यो उपचार पद्धतिको थप परीक्षण आवश्यक भए पनि कोभिड १९ का बिरामीको अर्को सम्भावित उपचार विधि हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। अहिले रेम्डेसिभिर नामक एन्टिभाइरल औषधि मात्रै परीक्षणका लागि स्वीकृत एन्टिभाइरल औषधि हो। यसले रोगको अवधी पनि छोट्याउँछ तर आपूर्ति पर्याप्त छैन।
हङकङ विश्वविद्यालयका डा. क्वोक युङ युएन र उनका सहकर्मीले एचआइभीका लागि प्रयोग हुने रिटोनाभिर, लोपोनाभिर र साधारण एन्टिभाइरल रिबाभिरिनसँगै बिटा इन्टरफेरोन औषधिको परीक्षण गरेका छन्।
अध्ययनमा सहभागी बिरामीलाई सामान्यदेखि मध्यम लक्षण देखा परेको थियो। संक्रमण पुष्टि भएको सात दिनभित्र उनीहरूको उपचार गरिएको थियो। संक्रमणको पूर्वअवस्थामा बिरामीको उपचार गर्नु उपयुक्त हुने चिकित्सक बताउँछन्।
युएनको टोलीले केही बिरामीलाई एचआइभीमा प्रयोग हुने औषधि दिएका थिए। ती औषधि कालेट्रा ब्रान्डको रूपमा पनि बिक्री गर्ने गरिन्छ। अन्यलाई लोपिनाभिर रिटोनाभिरको संयोजनसँगै एन्टिभाइरल रिबाभिरिन र बिटा इन्टरफेरोन दिइएको थियो।
लान्सेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित लेख अनुसार मिश्रित औषधि दिइएका बिरामी औसत सात दिनपछि परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएका थिए। एचआइभीको औषधि मात्रै पाएकाहरू १२ दिनेपछि पोजिटिभ देखिए।
मिश्रित औषधि दिइएका बिरामीलाई चार दिनपछि आराम अनुभव भएको बताइएको छ।
“प्रारम्भिक ट्रिपल भाइरल थेरापी सुरक्षित देखिएको छ। लोपिनाभिर रिटोनाभिर मात्रै दिइएका बिरामीको तुलनामा लक्षण पनि छिटो निको भएको छ र भाइरस पनि चाँडै घटेको छ। सामान्यदेखि मध्यम कोभिड १९ संक्रमण भएकाहरू अस्पताल बस्ने अवधि पनि घटेको छ,” अनुसन्धाताले लेखेका छन्।
त्यसबाहेक केही दुष्प्रभाव पनि रहेको उनीहरूले खुलाएका छन्। अध्ययनले महाव्याधिमा नयाँ आशा दिएको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा कोरोना भाइरसको बिरामी उपचार गरिरहेका डा. पिटर चिन होङले बताए। “यो अध्ययनले रेम्डेसिभिर एक मात्रै विकल्प नभएको र अन्य विकल्प पनि रहेको बताउँछ,” उनले भने,“यी औषधि सुरक्षित भएको प्रमाण पनि छ।” यी औषधि सजिलै उपलब्ध पनि छन्।
डाक्टर र फार्मासिस्टले कुन अस्पताल र क्लिनिकले रेम्डेसिभर पाउने हो प्रष्ट नभएको गुनासो गरेको छन्। कोभिड १९ का बिरामीको रोगको अवधि घटाउने देखिएपछि अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले आकस्मिक प्रयोजनका लागि रेम्डेसिभिरको प्रयोग स्वीकृत गरेको हो।
लान्सेटमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले अन्य विकल्पको ढोका खोलेको चिन होङले बताए। “कथित औषधि नपाए सायद यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।”
धेरै समूहले कोरोना भाइरसविरूद्ध विभिन्न औषधि संयोजन गरी परीक्षण गरिरहेका छन्। कुनै पनि प्रभावकारी पुष्टि नभएकोमा चिकित्सकहरू सहमत छन्। “कोभिड १९ का लागि हामीसँग समयको सुविधा छैन,” चिन होङले भने,“हामीसँग जे छ त्यहीबाट औषधि बनाउनुपर्ने अवस्था छ।”
Published Date: Monday, 25th May 06:43:45 AM